IVLC 3.0 isendleleni: iyaphucuka ngaphakathi, kodwa kufuneka iphucule ujongano | Ndisuka mac
IVLC ngumdlali ekungafanelekanga ukuba isilele kwi-Mac, njengoko isebenza njengemela eluncedo. I-QuickTime iphucule kakhulu, enkosi ngokuyinika inani elikhulu lee-codec, kodwa i-VLC sisiqinisekiso sokuba siyifakile kwaye isinika ukhuseleko lokuvula naluphi na uhlobo lwefayile. Kwelinye icala, ukunxibelelana okubonelelwa ngulo mdlali, zombini kwigalelo levidiyo kunye nakwimveliso, kuyenza ibaluleke. Imihla embalwa ukusuka ekuboneni Inguqulelo yokugqibela 3.0 yomdlali, ukuphela kuka-Okthobha ngumhla ocwangcisiweyo ngabaphuhlisi bayo, siyabona ukuba uhlobo lwe-beta lusebenza kakuhle. Makhe sibone ezinye izinto ezintsha.
Bekulindelwe, kodwa kuzisa iindaba ezininzi. Eyokuqala inento yokwenza nokukhutshwa komxholo ongaphandle kweMac yethu.I-VLC 3.0 iya kuba nenkxaso IChromecast ukusuka kuGoogle, kunye nokusebenza ukuyenza ihambelane namanye amajelo, kubandakanya Idlalwe iApple TV.
Ukuhambelana nezinye iinkqubo ezinje UPnP kunye neMiracast, Zikuluhlu lwezinto eziza kwenziwa yinkampani, kodwa kungekho mhla othile. I-UPnP Iyasivumela ukuba sithumele umxholo kwi-Smart TV, ngaphandle kokuba nezandiso ezinje ngeApple TV okanye iChannelCast, ukuba nje iTV iyayixhasa le protocol.
Nangona kunjalo uninzi lweziphuculo azibonakali ngamehlo. Olona phuculo lubaluleke kakhulu kolu hlobo lusebenza ngaphakathi. Ukuthatha inxaxheba ngokupheleleyo kwiinjini zokumisela iifayile bafezekise ukudlala ngokukuko ngakumbi kuneenguqulelo zangaphambili. Umzekelo yifomathi entsha yevidiyo ka-Apple. Ngotshintsho lwangoku, iiMacs ezithile zinengxaki yokudlala H265 / HEVC. Kwelinye icala, ngoguqulelo lwe-beta lwe-3.0 bayifunda ngaphandle kwengxaki.
Ukongeza, ingxelo entsha ibandakanya zonke izinto ezinqabileyo ezikhoyo kwi-Apple TV 4k entsha kunye nabadlali benqanaba lokuqala. Ke ngoko, sinayo I-HDR kunye neDolby Atmos kolu hlaziyo. Kwaye apha imisebenzi yayo ayipheli: ukungqinelana ne I-HTTP / 2, i-FTP, i-NFS okanye i-SMB, ukuveliswa kwakhona Iividiyo ezingama-360.
Icandelo elingalunganga lesikhangeli sisinxibelelanisi. Oku akufumani lutshintsho lukhulu, kushiyeka ngasemva ngoyilo lwezicelo eziphambili. Nangona kunjalo, ukusebenza kwayo akuyi kukushiya ungakhathali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » IVLC 3.0 isendleleni: iphucula ngaphakathi, kodwa kufuneka iphucule ujongano lwayo